Wax Badan Ka Ogaw Kulanka Horseed VS Muqdisho City Club – Goobjoog News
Kooxda Ciidanka xooda dalka ee Horseed ayaa wajhaysa dhigeeda Muqdisho City Club oo sanadkii lasoo dhaafay ay wada ciyaareen kama dambeysta tartanka kubbadda cagta Jeneraal Daa’uud Cabdulle Xirse,inkastoo xidigaha M.C.C ay ku hanten Rigoorayaal,balse kulanka waa is aragoodii 2aad horyaalka Somalia Premier League fasal ciyaareedka 2018-2019.
Kooxda Horseed kulankii u danbeeyay horyaalka waxa ay guul 3-1 ka gaartay xidigaha Jazeer Sports Club,Horseed waxa ay fadhisaa kaalinta 2aad,iyadoo leh 23-dhibcood.
“Ka Horseed ahaan diyaar ayaan u nahay kulanka aan la ciyaareeno kooxda dowladda hoose ee Muqdisho City Club aad baan isku naqanaa,balse labada dhinac waxaan farayaa in garoonka la yimaadaan ciyaar ku dheehan anshax midii guulaystana kan kale uu u hanbalyeeyo”waxaa Goobjoog Sports ciyaarta ka hor ugu waramay CabdiWali Ma’xed Max’ud (Cabdi Joon) oo ah layliyaha kooxda kubbadda Cagta Horseed.
Muqdisho City Club ciyaartii u danbeesay iyagana waxa ay guul 4-0 ka gaareen dhigeeda L.L.P Jeenyo,M.C.C waxa ay fadhiyaan kaalinta 5aad ee kala horeynta,iyagoo leh 17-dhibcood.
“Horseed kulankii hore way naga adkeen,balse iminka ciyaartooyda kooxdayda waa u diyaar kulanka muhiimka wixii kasoo baxa Natiijada ciyaarta diyaar ayaan u nahay,balse yoolkeena waa taageerayaasha usoo bandhigaan kubbadda aad u qurux badan” waxaa sidaas Goobjoog Sports u sheegay ciyaarta ka hor macallinka reer Uganda ee hogaamiyo kooxda dowladda hoose ee Muqdisho City Xuseen Mbalangu.
26/02/2019 Mogadishu City Club 1:2 Horseed SC
30/03/2018 Mogadishu City Club 3:2 Horseed SC
26/01/2018 Horseed SC 1:0 Mogadishu City Club
13/03/2017 Horseed SC 0:3 Mogadishu City Club
04/02/2016 Horseed SC 0:0 Mogadishu City Club
29/04/2016 Mogadishu City Club 2:0 Horseed SC
22/02/2015 Horseed SC 0:2 Mogadishu City Club
24/05/2015 Mogadishu City Club 5:0 Horseed SC
08/06/2012 Mogadishu City Club 1:1 Horseed SC
30/09/2012 Horseed SC 0:2 Mogadishu City Club
Tartanka-Horyaalka Somalia Premier League
Kooxaha-Horseed VS Muqdisho City Club
Cimiladda Xiliga Ciyaarta:-30° /26°C
Dibadbax Ka Dhan Ah Madaxweynaha Hirshabelle Oo Ka Socda B/weyne